robotic dog | Japan Info - नेपाली
Japan Info > Japan Info - नेपाली > robotic dog
जापानको सोनी कम्पनीले बनाएको यो रोबोट कुकुरले के के गर्न सक्दछ?
अंग्रेजी वर्ष २०१८ लाई “कुकुरको वर्ष” को रूपमा लिईएको थियो, र संयोगवश त्यो वर्ष सोनी कर्पोरेसनले उनीहरूको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट कुकुर, वा “आईबो” को नयाँ संस्करण निकालेको थियो। यस अगाडि सोनीले यो रोबोट कुकुरको नया संस्करण २००६ सालमा निकालेको थियो। आईबोलाई रोबोटिक्स बजारमा हालसम्म ल्याइएका सबैभन्दा परिष्कृत उत्पादको रुपमा लिईने गरिन्छ, तर यसको पछिल्लो संस्करण…
के हजुरले प्रदुषित जापानको तिन रोगको कथा सुन्नु भएको छ ?
जापानमा मेरो पहिलो महिना – खाना विशेष
ओकिननावाको निकै सुन्दर हातेरुमा टापुमा गर्न सकिने ६ कुराहरु